🥇 Ubalo-mali lokuhanjiswa kwinkampani yezothutho
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 701
Ividiyo ye-accounting yokuhanjiswa kwinkampani yezothutho
Oda i-akhawunti yokuhanjiswa kwinkampani yezothutho
Ngophuhliso lweenkonzo ze-intanethi zokuthengwa kwempahla, iinkampani zezothutho zifumene abathengi abongezelelweyo. Kwaneevenkile ezincinci, ezizama ukumelana nomzabalazo ongalinganiyo kunye nabakhuphisana nabo, zibonelela ngenkonzo yokuhanjiswa ukuze kube lula kubathengi. Xa kuziwa kwinkampani ejongene ngokuthe ngqo ekuthuthweni kwempahla, intlangano enobuchule yenkqubo yomsebenzi kunye nokunika ingxelo iya kunceda ukuhlala kule ndawo. Ngokuphendula ngokuchanekileyo ukuhanjiswa kwinkampani yezothutho, akunakwenzeka kuphela ukugcina indawo yayo kwimarike yempahla kunye neenkonzo, kodwa kunye nokuqhubela phambili.
Ukulawulwa kokuhanjiswa kwinkampani yezothutho kubalulekile kungekuphela nje kwintlangano yangaphakathi yomsebenzi. Ukuhanjiswa kade, ukonakala kwempahla kunye nezinye iingxaki ezivela kolu shishino kufuneka zibonakaliswe kwiingxelo kunye nocwangciso-mali ukuze kuphuhliswe izicwangciso zokunciphisa amaxesha entengiselwano kunye neendleko zothutho. Iirekhodi zezothutho ezenziweyo kufuneka zibandakanye zonke iinkalo, zinike ulwazi olupheleleyo.
Ukubandakanyeka kucwangciso-mali kunye nolawulo, iinkampani zothutho ezindleleni ziphuhlisa imifuziselo ethile yokulawula iimeko, ukugcina ingxelo kunye nokuhamba kwamaxwebhu ngokubanzi. Ukulawula kunye nokubalwa kokunikezelwa kwinkampani yelori kunceda ukulawula abathumeli, indawo yempahla, amaxesha okufika, ukuhamba kwezithuthi. Kukho iinkqubo ezibonisa indawo yeyunithi yezothutho ngexesha langempela, elinika unxibelelwano oluqhubekayo kunye nomqhubi. Oku kukwaquka ukubalwa kweendleko zepetroli ezichithiweyo, iindleko zokulungisa, izohlwayo zokungathunyelelwanga (ulibaziseko, umonakalo okanye ilahleko yepasile). Igcina umkhondo wemivuzo yabaqhubi kunye nabanye abasebenzi.
Amasebe eenkampani ezinikezela ngezithuthi ezinoxanduva lwezithuthi nawo agcina iirekhodi zazo, alandele imeko yazo, agcwalise amaxwebhu anxulumeneyo (umzekelo, ukuguga), ahlalutye inzuzo yokusebenzisa isithuthi esithile ngokuhambelana nomgama kunye nokubala ipetroli yayo. Olu lwazi luboniswa kwi-accounting yokuthunyelwa kwenkampani yokuthumela. Ukushwankathela iziphumo zocwangciso-mali kumasebe athile, sifumana idatha eqhelekileyo kulo lonke ishishini. Ngombulelo kwi-accounting enjalo, kungekuphela nje ukulawula imeko yezithuthi zezithuthi ezenziwayo, kodwa nakwimali yeshishini ngokwalo.
Njengoko ubona apha ngasentla, ukubalwa kwemali akukho lula. Akusoloko kukho iingcali ezivela kwisebe locwangciso-mali ezigcina iirekhodi zeenkampani zezothutho zikwazi ukuzimela ngokuzimeleyo zonke izalathisi. Iinkqubo ezikhethekileyo ezenza iinkqubo ezininzi ngokuzenzekelayo ziza kuhlangula kwimiba enjalo. Ngokomzekelo, isofthiwe (isofthiwe) iya kwenza ukubalwa kwezibonakaliso kwimpumelelo yokuhanjiswa, inkampani, ukulawula kwimizuzwana nje. Ukuthelekisa, umntu ebeya kuchitha ixesha elininzi sele ekwinqanaba lokuqokelela ulwazi oluyimfuneko kucwangciso-mali nokubala.
I-Universal Accounting System (USU) yi-software-inkokeli kucwangciso-mali, ukunika ingxelo kunye namaxwebhu. I-Accounting System izenzela inani lemisebenzi ebisenziwa ngaphambili ngesandla. Kukulungele ukubalwa kwengxelo yokuhanjiswa kwinkampani yezothutho esele ivele ngenxa yokuba ukukwazi kwayo ukudibanisa nezixhobo kukuvumela ukuba ufumane izikhombisi ezifunwayo ukude, ngokuzenzekelayo nakwi-intanethi.
Ulawulo oluzenzekelayo lwezithuthi kwinkampani yokuhambisa.
Indlela entsha yokunika ingxelo yokuhanjiswa kwinkampani yeelori.
Unxibelelwano olukhawulezileyo nomqhubi. Ukukwazi ukutshintsha ukuhanjiswa kwendlela ekuhambeni.
Ukulawula zonke izalathi zezithuthi ezibandakanyekayo. Ukulandelela imiqathango yogcino, imiqathango yokusebenza, iiyure zokusebenza, ixesha lokuhamba.
Inkqubo elula yokulandelela ixesha lokusebenza kwekhuriya, ukubala umvuzo wakhe. Ukuboniswa kwalo lonke ulwazi olusebenzayo kuyo (ubude benkonzo, umsebenzi, imisebenzi egqityiweyo, umvuzo, ikhefu lokugula, iibhonasi).
Ugcino lwedatha yemveliso. Ikhono lokucwangcisa ngokulula idatha, fumana ipasile kwinkqubo ngenombolo, umenzi, ummkeli.
Ukugcinwa kweencwadi kunye nokubalwa kwemali yenkampani yezothutho. I-Accounting System ifanelekile kwiinkampani zalo naluphi na uqhelaniso kunye nobukhulu. Kuyo nayiphi na indawo ishishini lakho elikhuthazwayo, inkqubo iya kukwazi ukulikhulisa.
Ukwenza lula ulawulo lweentlawulo ezingenayo neziphumayo. Isoftware inenkqubo yesaziso eyakhelwe-ngaphakathi eya kukuxelela ukuba umhla obekiweyo usondele, ukuba umntu akahlawulanga ngexesha.
Ukwenziwa ngokukhawuleza kweengxelo malunga nokuhanjiswa kweempahla. Ukuboniswa kwazo zonke izalathisi ezifanelekileyo. Ukukwazi ukuhlela kanye ezo zalathisi ongathanda ukwakha ngazo ingxelo.
Ukuvelisa indlela kwiprogram, kuthathelwa ingqalelo zonke iindawo zokumisa kunye neendawo.
Ujongano lwabasebenzisi abaninzi.
Ukhuseleko lweprofayile yakho kunye nedatha yakho.
Ukufikelela kude. Uncedo kukuba endleleni ukufikelela kulwazi oluyimfuneko kuhlala. Ekuphela kwento oyifunayo yi-Intanethi.
Umbono jikelele wemeko kwindawo yokugcina ukuhanjiswa kwezithuthi, ukubala ukunyakaza kweemveliso kwindawo yokugcina impahla, ukubeka iliso ukuthotyelwa kwemiqathango yokugcina ehambelana nenkcazo yemveliso.
Ukuqinisekisa ukuhanjiswa okukhawulezayo, ukuphucula umkhondo.
Iifom zeLaconic zeengxelo ezinelogo yombutho wakho wezothutho. Ukubonisa kwiifom kuphela ezo zinto zifunekayo kwisihloko esithile.
Isishwankathelo sezalathi kuzo zonke iigaraji zemoto, kwiikhuriya, amasebe, njl.